Push Kushambadzira Kuchinja nePasbook | Martech Zone
Pushidzira Kushambadzira Kuchinja nePasbook
Chipiri, Mbudzi 27, 2012 Chipiri, Mbudzi 27, 2012 Douglas Karr
Ini ndichangotanga kushandisa Passbook pane yangu iPhone pandakashanyira Starbucks. Kunyangwe ndichidada neangu Starbucks Goridhe Kadhi, Ndinofara kufara kudzikisa kukora kwechikwama changu nekadhi rimwe chete. Ini ndinongotambidza barista foni yangu uye ivo vanokwanisa kuongorora mibairo yangu kadhi ipapo ipapo! Ndichishandisa iyo Starbuck's app, ndinogona kurodha zvakare kadhi rangu zvakananga kubva kunhare yangu zvakare.
Iyo Inotevera Webhu nguva pfupi yadarika yakaita a tumira zvese nezve Passbook uye kuti mabhizinesi anofanirwa kusvetukira sei muchikepe, asi chirevo pane chakatumirwa chakandibata. Nekuti Apple inosanganisirwa Passbook neayo ziviso sevhisi, mapashure anova mukana wepamberi wemabhizinesi kusundira zvigadziriso nyore kune vashandisi vayo.
Heano mhinduro kubva kuna Jim Passell pachinyorwa ichi, achitsanangura kudzoka kukuru pane kudyara:
Wese mumwe wevatengi vangu akawana imwe yepasipoti yangu, anowana gadziriso vhiki nevhiki yechipo chitsva. Kupasa kwavo kwakavazorodza kana kuvazivisa. Kana ini ndinovatumira chiziviso chekuuya kwekutengesa, kana tsamba yemunhu kubva kuna maneja wechitoro, kana chero chinhu. Saka pasipoti yangu inogara pamusoro pechikwama chavo uye inova chiteshi changu chekutaura navo. Ivo vanova vatengi vechigarire, kunyangwe ivo vangangodaro vakatanga kunze chete koponi-clipper.
Ngatizvitarisei. Iyo inbox inotambudzwa ne spam faira nyaya uye vatengi vave chiveve kuemail kushambadzira. Nepo kuchine kudzoka kusinga tsanangurike mukudyara nekuda kwemutengo wakaderera weemail, kutariswa idambudziko riri kukura. Kutumira mameseji ndechimwe chinoshamisa tekinoroji tekinoroji, asi vatengi vanowanzozeza kunyorera uye kuburitsa yavo nhamba yefoni kuti vawane. Push notices kuburikidza nesoftware application uye maapps senge Passbook anogona kunge ari ako akanakisa kushambadzira kushambadzira mukana.
Takakurukurawo Geofencing, proximity-based marketing nzira inosanganisira SMS (mameseji) kana kushambadzira kweBluetooth. Kamwe kana nharembozha yako ikapinda munzvimbo, unogona kusundira zviziviso. Zvakanaka, Passbook inopa geolocation senge zano, futi. Iwe unogona chaizvo kusundira pasiti yekuvandudza kana mumwe munhu akapinda mukati meimwe nzvimbo yenharaunda. Kupfuura zvese, iwe haudi chero yekuwedzera tekinoroji yekuitsigira sezvo yakavakirwa chaipo kubva kune nhare geolocation services.
Sezvo Passbook iri kutoda kunyoreswa kwetikiti, kukwira bhodhi, coupon kana chirongwa chekuvimbika, ava ndivowo vashandisi vako vanobatikana. Vakatotanga kutsvaga hukama nekambani yako. Uye rutsigiro haruna kungogumira kumadivaysi eIOS, Attido Mobile yakagadzira PassWallet, yeApple app inoshumawo yakajairwa kupfuura packet.
Unogona kuvandudza yako Pasa padivi pechishandiso chako cheIOS uchishandisa raibhurari yemuno, kana iwe unogona kushandisa SDK senge Passslot. Chechitatu bato kuvandudza uye manejimendi makambani anosanganisira WalletKit, Passdock, PassTools, PassPages, PassRocket uye PassKit.
Tags: Geolocationnharembozha matekinorojizvakaitikapassbook apple pasipotipassdockpasipotimapasipotipassrocketpassslotpasswalletkushambadzira kushambadziraPush matekinorojichikwama
Nzira gumi dzekushandura Vashanyi Vachishandisa Psychology
Wedzera Urongwa Hwako Hwepasi kuGoogle Mepu
Mbudzi 27, 2012 na5: 43 PM
Ini ndiri muvambi / CEO wePassTools, uye isu tiri mumwe wevatungamiriri venzvimbo iri kubuda yekuvaka nzvimbo. Ndingafarire iwe kusanganisira isu mune yako runyorwa futi.
Mbudzi 27, 2012 na10: 56 PM
Zvaitwa! Thanks Joe!
Mbudzi 28, 2012 na12: 12 PM
Chinyorwa chakanyorwa zvakanaka Douglas!
Ini ndinotungamira timu yechigadzirwa kuVibes (http://www.vibes.com), inhare yekushambadzira tekinoroji kambani inoshanda nemabhureki uye vatengesi kuumba hukama nekukurumidza uye hunogara kwenguva refu nevatengi vavo. Tiri kuita kubheja padiki kuPasbook, yatove neyakagadziriswa Pass lifecycle manejimendi kugona (gadzira - isa - gadzirisa - ongorora - re-tarisa) muchikuva chedu. Isu takaparura Passbook Beta Chirongwa uye tine akati wandei, emunyika mabrands anotarisa kuti ashandise kugona kwePasbook sechikamu chehurongwa hwavo hwakawanda hwekushambadzira nhare.
Ini ndaida kuridza mufaro wako nezve Passbook. Ini ndinotenda ichashandura nzira mabrands anobatana nevatengi vavo vakavimbika uye dzimwe nguva-vakavimbika. Uye yatosundidzira Google kuti vafunge zvekare zano ravo reGoogle Wallet.
Mbudzi 28, 2012 na4: 51 PM
Chinyorwa chakanaka, uye nekutenda nekugovana pasarudzo dzekuvandudza. Tichifunga nezve kukosha kwese kumutengi uye mushambadzi, zvinoshamisa kuti makambani mazhinji haana kusvetukira pabhodhi kusvika pakuzviwedzera kuPassbook. Wataura chokwadi, zvakanakira mutengi. Ndichitarisira kuona mamwe mabhizinesi achijoinha Passbook, uye kubvisa mapurasitiki muhomwe yangu.
Chinyorwa chikuru Douglas uye nekutenda nezvakataurwa.
Iko kusundira kugona pamwe ndiyo inonyanya kukoshesa chimiro chePasbook. Vatengi vedu uye vatinoshanda navo vanogara vachifadzwa pavanotanga kuona iyo yekuvharira meseji meseji uye iyo 'kutenderera yekuvandudza'. Izvo zvakare zvinovabatsira zvirinani kubatanidza Passbook Passes mubhizinesi ravo, uye kusangana nevatengi vavo. kureva kuti ivo havangoite chete kudzoreredza kwedhijitari kopi rakamira kana kadhi rekuvimbika.
Chero ani zvake anogona kuona izvi 'Push update' yavo vega izvozvi. Ingo tora pasi 'AbraKebabra' kupfuura kubva pane peji redu uye flip iyo Pass pamusoro kuti ubatanidze kuPass Kugadziridza URL. Iyi vhidhiyo inokurumidza inoratidza maitiro ekuzviita: http://youtu.be/D7i7RsP3MvE
Kana iwe usati wambosangana nePasbook Push zvakakodzera kuti ubve waenda; uye nepo AbraKebabra sampu Pass ichiratidzira gadziriro yekuyera, mikana yacho haina muganho (sezvo chero munda unogona kuvandudzwa uye 'kusundirwa')